လူမနေတဲ့ကျွန်းဆီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပို့မယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
လူမနေတဲ့ကျွန်းဆီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပို့မယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ 4.5
၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တချို့ကို လူသူမနီးတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂက ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကိုဟန့်တားနိုင်ဖို့ အခုက စလို့ ကြိုးစားရမယ်လို့ သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ပိုပူနွေးမလာဖို့ တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းစီက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီဒဏ်က လွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်ရာတွေကို တည်ဆောက်ရာမှာ အကူအညီတွေ ရဖို့ နဲ့ နစ်နာကြေးတွေရရှိဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းက ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာတွေက ဒီဇိုင်း အပြောင်းအလဲကို ၃ နှစ်ခြား တစ်ခါလောက်ပဲ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ …. စတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ရှုစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #အင်ဒိုနီးရှား #ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် #ရိုဟင်ဂျာ #ဆိုဗီယက်
Author — San Thura
ငါတို့နိုင်ငံမှာ ကောင်းကောင်းမနေချင်တော့ လူမနေတဲ့ကျွန်းမှာသွားနေပေါ့ဟ
Author — Khun lamin
Good to hear from bbc😊😊😊yeah.. Let they out of country😁😁😁we myanmar also😀😳😳Thx bbc.👍👍
Author — Kokung Lim
ငါလိုး ရိုဟင်ဂျာ လီးရိုဟင်ဂျာလား
Author — Hla Ko
ပို့ပစေပေါ့။ သူတို့လူတွေဘဲ။ မသင့်ဘူးလို့ပြောတဲ့ ငကြောင်တွေပါ အဲဒီကိုရွှေ့ yangheelee ကိုအဲ့မှာ
Author — MSN Morning Glory
Author — minhan thu1997
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုယ်တာဝန်ယူသင့်ပါတယ်၊ ....
Author — May Thazinphoo
အရမ်းကောင်းပါတယ် ဘင်္ဂလားက ဘင်္ဂလားနိုင်ငံဘက်မာနေတာ သတင်းမဟုတ်ပါ
Author — Chit Min Naing
ရိုဟင်ဂါခေါင်းဆောင်တွေက မြန်မာအစိုးရကို ချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နည်း
Author — Cheapest Tone
ကျွမ်းပို့မယ်ဆိုတောသနားပါတယ် န်ိုင်ငံမာထားရင်လဲ ပြည်သူတွေမငြိမ်းချမ်းဘူး
Author — ma khaing
မူစလင်နိုင်ငံအချင်းချင်းတောင် ၊ မွတ်ကုလားတွေကိုမခေါ်ချင်တော့ ၊ လူမနေတဲ့ကျွန်းပဲပို့ လိုက်ပေါ့ ၊
၊ လူနဲစုတဲ့ ၊ နဲသေးတယ်ထပ်မွေးကြ ၊ အလာချစ်တာပေါ့ ၊
အဲ့ဒီ့ လူမနေတဲ့ကျွန်းမှာ ၊ အလာကိုအကျယ်ကြီးအော်ခေါ်ကြ
ပက်ပက်ဆက်ဆက် အနိုင်ကျင့်လို့ရပါပီ။ ဗြိတိန် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းသလို EU နဲ့ UN က စစ်ကြေငြာဖို့ ICC ကို အသုံးချ၊ လူအခွင်အရေးအကြောင်းပြ လုပ်ပါ။ အနိုင်ရတော့မှာပါ။ ပြန်ခံရတဲ့အချိန်ကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့။ BBC ကို မယုံတာက ၂၀၀၆ထဲကပါ။ ပြောခြင်တာပြောပါ။
Author — Uert Every
ွစစ်ရေးတွေ ပိတ်ဆို့ခံနေရတာ ဘင်္ဂလီကဘင်္ဂလီပဲ
Author — Allah terrorist
မင်းတို့အဖေ ဘီဘီစီ အင်္ဂလန်ကို ပြန်ခေါ်ခိုင်းလိုက်လေ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကိုလိုနီချဲ့ပြီး နေရာတိုင်းမှာ အရှုပ်တွေထားခဲ့တာ မင်းအဖေ ဘီဘီစီက ဘာလို ထည့်မပြောတာလဲ
Author — THIHA TUN THIHA TUN
အမှန်တရားက တံခါးခေါက်ရောက်လာချိန်မှာတော့ အမှားက ကမ္ဘာပတ်ပြီးပြီတဲ့။ ဒီဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာ ဘင်္ဂါလီခေါ်ရိုဟင်ဂျာတွေက မူရင်းနေထိုင်သူ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ၊ မြို ၊ ဒိုင်းနက်လူမျိုးတွေကို မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အရပ်သားအစိုးရ က ကြောက်ရွံ့တဲ့အသံတွေ ၊ သေအံ့မူးမူးအသံတွေ ၊ အဲတာတွေလည်း ဘယ်လိုပဲ သြဇာတိက္ကမကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်သတင်းဌာနကမှ ဖော်ပြတာမတွေ့ရဘူး။ တခါရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ စစ်တပ်တွေ ၊ ရဲစခန်းတွေကို အဲလို အကြမ်းဖက်လူတွေကသိမ်းပိုက်ပြီး လက်နက်လုယူသွားတော့လည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့တပ်မတော်က အဲလို မူရင်းနေထိုင်သူတွေကို ကာကွယ်ရင်း အသက်ပေးသွားတဲ့ လူတွေကိုလည်း အရမ်းကို လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများက သတင်းဌာနတွေက မဖော်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးနော်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘင်္ဂါလီခေါ်ရိုဟင်ဂျာတွေကပဲ မလုံမလဲဖြစ်လို့ သူတို့နေခဲ့တဲ့ရွာတွေကို မီးရှို့ပြီး သူတို့တွေရဲ့မိသားစုတွေရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုပြန်သွားတော့မှ ဟိုဘက်ကနေ မေးသမျှကို သနားစဖွယ်မျက်နှာလေးတွေနဲ့ ပေါက်ကရလျှောက်ဖြေတာကိုကျတော့ ခင်ဗျားတို့ ဇွတ်မှိတ်ပြီးဖော်ပြတာမလား။ စစ်တပ်က ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ သူတို့တွေက လူ့အခွင့်အရေး ၊ ကလေးအခွင့်အရေး ၊ မိန်းမအခွင့်အရေး အကုန်ချိုးဖောက်တယ်ဗျာ။ ကုန်ကုန်ပြောရင် ဘင်္ဂါလီတွေကို ကယ်တင်တဲ့အနေနဲ့ သိပ်မကြာဘူး ခင်ဗျားတို့ သားပျိုသမီးပျိုတွေအခွင့်အရေး ၊ ၊ ပိတ်သွားဦးမယ်သိလား။ လူပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာရုံနဲ့ လူလိုနေမှ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူလိုတွေး ၊ လူလိုသိ ၊ လူလိုဆက်ဆံ ၊ လူလိုနားလည်မှ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ထိုက်တန်တာ။ အခုဟာ တပ်မတော်က နယ်မြေရှင်းလင်းတယ်။ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို အားပေးတဲ့သူတွေကို သုတ်သင်တယ်။ ဒါစစ်တပ်အလုပ်ပဲ။ ချေမှုန်းရမယ်လေ။ မချေမှုန်းလို့ အကြမ်းဖက်သမားတွေက အင်အားများလာရင် သူတို့သေသွားမှာပေါ့။ ဒါတိုင်းပြည်အတွက် ၊ မူရင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် သူကာကွယ်တာလေ။ သူ့အလုပ်သူလုပ်တာ ဒီနေရာမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကြီးကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ထိုင်မပြောနေနဲ့ဗျာ။ အခုလို နှစ်နိုင်ငံကြားက ပြဿနာတွေက ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ သူများနိုင်ငံထဲကို ခိုးဝင်နေတာကို သိသိကြီးနဲ့ လွှတ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဝန်ကြီးချုပ် သူက ကမ္ဘာပတ်ပြီးတော့ သူ့တာဝန်သူမကျေတာကို ခင်ဗျားတို့လည်း လိမ်တာကြီးကို သိသိကြီးနဲ့နားထောင်နေတာ။ ပြောရမယ်ဆို အရာရာတိုင်းဟာ တနေ့ကျရင် ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကြီးတွေ ဝဋ်ဆိုတာလည်လိမ့်မယ်။ ကောင်းကောင်းကြီးခံရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင်တော့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားထားပါ။
Author — Shwepyi Soe
ဘယ်သူမှ ဘယ်မြေမှ မပိုင်
မျိုးမစစ်တဲ့သူကသူများလူမျိုး ဘာသာကိုဆော်ကားလိမ်မယ် လူဆိုတာ လူပိသရမယ် အခြေခံဝါဒီ တွေ လူ့ခန္ဒာနဲ့ တိရိစ္ဆာန် စိတ်မဖြစ်သင့်
Author — Min Tun
မြန်မြန် လေးသာပို့လိုက် ကျေးဇူးတရားမှ မနားမလည်တာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ က ကမ္ဘာ အာရုံစိုက်အောင် လုပ်ပြနေတာ
ရိုဟင်ဂျာ ၁၀၀ ကျော် ရန်ကုန်မှာ ဖမ်းမိနဲ့ တခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ်- ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရုတ်အခန်းကဏ္ဍ - ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၁.၃၀.၂၀၁၈)
ချိုးနိုင်ခေါက်နိုင်မယ့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း - ဘီဘီစီ ကလစ် နည်းပညာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်မလာဘူးဆိုတာ မြန်မာကြိုသိနေ - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၇-၀၁-၂၀၂၀)
ဒေါ်စု ထွက်ဖို့ ကုလ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီး ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းများ...
အစ္စရေးရောက် ထိုင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကြေမွသွားတဲ့ အိပ်မက်များ (အပိုင်း ၁)
ဟောငျကောငျလုံခွုံရေးဥပဒသေဈကို တရုတျအတညျပွု - BBC News မွနျမာ
ရခိုငျနဲ့ ခငျြးမှာ အငျတာနကျ ပွနျဖှငျ့ဖို့ ရခိုငျပါတီနဲ့ အရပျဖကျ အဖှဲ့တှေ တောငျးဆို - BBC News မွနျမာ...